बगर भाइखलक भेट्रान्स उपाधि कसलाई ? | eAdarsha.com
बगर भाइखलक भेट्रान्स उपाधि कसलाई ?
पोखरा । बगर भाइ खलक एट ‘ए’ साइड भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा टि बर्गर ललितपुर र आइ बोस मिसा सान मिया भिड्ने भएका छन् ।
शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनलमा टि बर्गर ललितपुर भेट्रान्सले नवलपरासी भेट्रान्सलाई टाइब्रेकरमा ३–१ गोल अन्तरले हराउँदै फाइनल पुगेको हो । निर्धारित समयको खेल २–२ गोलको बराबरी भएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो ।
पहिलो हाफमा कृष्ण मालाकार र भूपेन लिम्बुले गोल गर्दै टिमलाई २–० को गोलले अगाडि रहेको थियो । दोस्रो हाफमा नवलपरासीका हिराबहादुर गुरुङ र दीपकबहादुर थापाले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । खेलमा ललितपुरका गोलरक्षक सञ्जय ठाकुर म्यान अफ दी म्याच भए ।
यस्तै, दोस्रो सेमिफाइनलमा आइ बोस मिया सान मियाले मनाङ मस्र्याङ्दी भेट्रान्सलाई पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुग्यो । निर्धारित समयको खेल गोल रहित बराबरी भएपछि टाइब्रेकरमा २–१ गोल अन्तरले हराउँदै उसले फाइनलमा टी बर्गरसँगको भेट पक्का गरेको हो । खेलमा सञ्जीव खड्गी म्यान अफ दी म्याच घोषित भए । फाइनल शनिबार हुने प्राविधिक संयोजक खगेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।
उपाधि विजेताले रनिङ शिल्ड सहित नगद १ लाख ११ हजार १ सय ११ लाख र उपविजेताले नगद ५५ हजार ५ सय ५५ ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफी सहित १० हजार तथा उत्कृष्ट गोल किपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर र फरवार्डलाई ट्रफी सहित जनही ५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
रनिङ सिल्डमा सेमिफाइनल समीकरण
पोखरा । मादी गाउँपालिकास्तरीय तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताअन्तर्गत छात्रछात्रा भलिबलमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । बिहीबार छात्रातर्फ महारुद्र…
उल्लेरी कप सेभेन ए साइड हुने
पोखरा । उल्लेरी युवा क्लब पोखरा–२२ ले ‘उल्लेरी कप पोखरा २२ सेभेन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने भएको छ…
मादी बी–१३ इन्टर नेप्लिज्को च्याम्पियन
Levitra mg Les patients ont que es cialis répondu aux questions du journal de sept après chaque électrophysiologiques avec ceux…
‘ए’ डिभिजन लिगको टिकट मूल्य निर्धारण
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको…